करिश्माको आत्मविश्वासः रिजल्ट ‘राम्रै’ निस्किनेमा ढुक्क ! | Ratopati
करिश्माको आत्मविश्वासः रिजल्ट ‘राम्रै’ निस्किनेमा ढुक्क !
personकुवेर गिरी exploreकाठमाडौं access_timeचैत २०, २०७५ chat_bubble_outline2
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर अहिले फ्री छिन् । सोमबार एसईईको अन्तिम परीक्षा दिएकी उनले अहिले आफू पढाइको चापबाट मुक्त भएको बताएकी हुन् ।
‘एसईई सकियो निकै आनन्द लागि रहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले कपालमा तेल लगाएर आनन्दले घरमा बसिरहेकी छु । कहिले टिभी हेर्छु । कहिले सुत्छु । विन्दास भएकी छु ।’
तीन वर्षदेखिको नियमित स्कुले रुटिन सकिएकोले अहिले खुसी लागेको सुनाइन् ।
करिश्माले डिल्लीबजारस्थित विजय स्मारक मावि केन्द्रबाट एसईई परीक्षा दिएकी हुन् ।
मैतिदेवीस्थित त्रिवेणी माविकी विद्यार्थी उनलाई सोही माविले विद्यालयको नियमित विद्यार्थीको रुपमा परीक्षामा सहभागी गराएको थियो ।
करिश्माले तीन बर्ष अगाडि मैतीदेवीमा रहेको त्रिवेणी माविमा कक्षा ८ देखि नियमित अध्ययन सुरु गरेकी थिइन् । उनी समान्य विद्यार्थीझैँ नियमित स्कुल जाने गर्थिन् । विद्यालयको हरेक कार्यतालिका पालना गर्थिन् ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी सदाबहार ‘ब्युटी क्वीन’को परिचय बनाएकी उनी अभिनयमा पनि व्यस्त रहँदै आएकी थिइन् । सुटिङ पर्दा स्कुलले उनलाई कहिले काहीँ छुट्टी पनि दिन्थ्यो । आफ्नो कामका लागि उनले प्रायः स्कुलको साप्ताहिक बिदाको दिन शनिबार र अन्य विदालाई सदुपयोग गर्दै आएकी थिइन् ।
‘बालबालिकाझैँ तीन वर्षको नियमित स्कुलको दैनिकी मेरा लागि कम चुनौती भने थिएन,’ उनले अगाडि भनिन्, ‘अहिले स्कुले जीवन सकियो । स्कुल अनुभव रोमाञ्चक रह्यो । अहिले रमाइलो र आनन्द महशुस गरिरहेकी छु ।’
सामान्य विद्यार्थीको आफ्नो उमेर धेरै माथ भएकोले पनि स्कुलको नियमति कार्यतालिका पालना गर्न धेरै कठिन भएको उनले अनुभव सुनाइन् । ‘एक्सरसाइज गर्नुपर्ने, चलचित्रमा समय दिनुपर्ने लगायतका धेरै कुरा स्कुलको रुटिनले धेरै कुरो छुट्यो,’ उनले थपिन् ।
आफूभन्दा धेरै साना उमेरको भाईबहिनीसँग एसईई दिँदा अलिकति पनि सङ्कोच नलागेको उनले बताइन् । ‘परीक्षा बिहान थियो । जाममा परेर एक दिन ढिलो पुगेँ,’ करिश्माले परीक्षाबारे अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘सामाजिक शिक्षाको जाँच थियो । त्यो मेरा लागि अप्ठ्यारो विषय थिएन । तर ढिलो भएकोले हतार–हतारमा परीक्षा दिनुपर्यो ।’
‘पछाडि २ वटा प्रश्न रहेछन् । हतारमा त्यो हेन र उत्तर लेख्न पनि भ्याइएन,’ उनले परीक्षाका सबै विषयमध्ये यही विषय अलि बिग्रेको हुनुपर्ने अनुमान लगाइन् ।
समग्रमा सबै परिक्षा राम्रो भएको बताउँदै उनले आफू नतिजाको व्यग्र प्रतिक्षामा रहेको बताइन् । ‘पास त पक्कै हुन्छु । तर ग्रेड के आउँछ । त्यो चाहीँ यकिन छैन । अहिलै कसरी भन्ने’ उनले अगाडि भनिन्, ‘रिजल्ट ‘रामै्र आउनेछ । म ढुक्क छु ।’
राम्रो नतिजा हुने आशा करिश्माले त्यसै गरेकी होइनन् । परीक्षाका लागि भनेर उनले एक महिना घरमै बसेर तयारी गरेकी थिइन् ।
‘मेरो स्कुल र घरको दुरी धेरै टाढा थियो । स्कुल आउँदा जाँदै दिन बित्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘बाटोको दुरी लामो भएकोले होमवर्क समेत गर्न भ्याउन्न थिएँ । बाटोमा समय बिताउनु भन्दा पछिल्लो एक महिना घरमै बसेर तयारी गर्न उचित ठाने ।’ उनले परीक्षाका लागि विज्ञान र लेखा विषयको ट्युसनसमेत लिएको जानकारी गराइन् ।
यसकारण स्कुल जाने इख पलायो
यो उमेरमा स्कुल जाने जाँगर करिश्मामा त्यसै पलाएको होइन । यसको पछाडि एउटा रोचक कहानी पनि छ ।
तीन वर्ष अगाडि उनी कलाकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेर भर्खरै बामे सर्दै थिइन् । तर, उनको राजनीतिक करियरको शुरुवात सुखद हुन सकेन ।
राजनीतिमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै लागेको एउटा घाउ अझै उनको मस्तिष्कमा आलै छ ।
प्रसङ्ग हो – डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको कार्यक्रमको । तीन वर्ष अघि अगाडि पार्टीले आयोजना गरेको एक भेलामा उक्त भेलमा करिश्मा पनि सहभागी थिइन् । भेलामा धेरैले मन्तव्य राखे । तर पार्टी भित्रकी एक ‘पीएचडी’ महिलाले राखेको मन्तव्यले भने उनको मनमा गहिरो घाउ बनायो ।
करिश्माको भनाई अनुसार ती महिलाले उनीतिर लक्षित गर्दै ‘हाम्रो पार्टीमा एक अनपढ कलाकार पनि छन्,’ भनेर टिप्पणी गरेकी थिइन् ।
उक्त टिप्पणीले उनलाई चोट मात्र दिएन, उनमा पढ्ने इख पैदा गरायो । सोही घाउ निको पार्न उनी अध्ययनतिर लागेकी हुन् ।
‘तपाईं मजस्तै ३० वर्ष कलाकारिता गर्न सक्नुहुन्न तर म तपाईं जस्तो पीएचडी गरेर देखाउन सक्छु भनेर एक दिन डाक्टर करिश्मा मानन्धर लेखेर देखाउँछु,’ उनले सो बेला ती महिलालाई जवाफ दिएकी थिइन् ।
त्यसलगत्तै उनी स्कुल भर्ना भएकी हुन् । उनलाई अध्ययनका लागि डा. बाबुराम भट्टराईले पनि हौस्याएका थिए ।
करिश्माको डाक्टर बन्ने लक्ष्यको यो पहिलो खुड्किलो हो । पहिलो खुड्किलो पार होला कि न होला, त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ ।
April 4, 2019, 12:47 a.m. Laxman
Karishma Manandhar has set an excellent example that age cannot bealimit orabarrier for achieving what you want. Inasociety like Nepal where education is not givenadue importance since the final outcome or the success is measured in how much wealth you have earned, Karishma would be remembered in the history. Getting educated and making others educated by influencing hundreds are two different things. Ifasingle person who is not educated enough, starts following like what she did Karishma isasuccess to me. The best way to influence another human being is by example. All the best Karishma!!!
April 3, 2019, 11:37 p.m. surya rogu
sabaile chinxan tesai pass garidihalxan ni pc attached gareko hudorahexa....ijatkai lagi pani pass gardinxa karisma ra santa chaudhary lai...no tention.